सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन भइरहेको छ चलखेल – Everest Dainik – News from Nepal
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन भइरहेको छ चलखेल
किन इन्धनको मुल्य घटदा हवाई भाडा घटने, गाडीभाडा नघटने ?
काठमाडौं, असार २४ । पुरानो नेपाली उखानै छ, नेपालको कानुन दैवले जानुन । नेपालमा सायद नेताहरुले भनेको जस्तो विश्वका उत्कृष्ट संविधान छ, कानुन, ऐन, नियम अनेक छन् । तर नेपाल उस्तै गयगुज्रेको अवस्थामा छ नेपाली उही अवस्थामा छन् किन ? किनकी यहाँ पहुंच भएकाहरुका लागि जे पनि सम्भव पनि हुन्छ । ऐन, कानुन, नियम केही लाग्दैन । अझ नेपालको यातायात क्षेत्रमा भन्ने हो भने यातायात व्यवसायीहरुलाई त्यसले अलिकति पनि छुंदैन । यातायात क्षेत्रमा मनपरी चलिरहेको छ । तर सरकारी निकाय व्यवसायीको प्रभावमा मौन छ ।
चार वर्षअघि नेपाल सरकार र यातायात व्यवसायीबीच वैज्ञानिक भाडादर लागु गर्ने सहमति भएको छ । इन्धनको मुल्य घटदामा भाडा घटने र बढदामा भाडा बढने । त्यसबीच कयौंपटक इन्धनको मुल्य घट्यो तर एकपटक मात्र यातायातको भाडा घट्यो । धेरै परको कुरा छाडौं यही असार महिनामा पनि दुईपटक इन्धनको मुल्य घटिसकेको छ ।
नेपाल आयल निगमले असार महिनामा मात्र दुई पटक गरेर डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपयाँ ५० पैसा इन्धनको मुल्य घटाएको छ । गत असार २ गते पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपयाँ ५० पैसा घटाएको थियो भने असार १९ गते प्रतिलिटर दुई रुपयाँको दरले मुल्य घटाएको थियो ।
आयल निगमले असार २ गते इन्धनको मुल्य घटाएपछि भाडा घटाएका वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुले असार १९ गते निगमले इन्धनको मुल्य घटाएपछि हवार्इ भाडा घटाइसकेका छन् । असार १९ गते सरकारले हवाइ इन्धनको मुल्य घटाएपछि असार २१ गतेदेखि लागु हुने गरी वायुसेवा कम्पनीले यसरी भाडा घटाएका छन् ।
यसरी घट्यो हवाइ भाडा
सबैभन्दा धेरै इन्धन शुल्क सुगम रुटअन्तर्गत धनगढीको घटेको छ । काठमाडौं–धनगढीको एकतर्फी भाडाअन्तर्गत इन्धन शुल्कमा १ सय ८१ रुपैयाँ घटेको छ । नयाँ भाडादर अनुसार सबैभन्दा लामो दुरीको काठमाडौं–धनगढीको भाडा १२ हजार १९ र कम दुरीको सिमराको भाडा ३ हजार ४५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडौ–विराटनगर ७ हजार १ सय ४, काठमाडौं–भद्रपुर ८ हजार ६ सय ७६, काठमाडौं–भैरहवाको ५ हजार ९ सय १३ र काठमाडौं–तुम्लिङटारको नयाँ भाडादर ५ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
काठमाडौं–नेपालगञ्ज ८ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ कायम गर्दै संघले काठमाडौं–जनकपुरको भाडा ३ हजार ९ सय ४८ र भरतपुरमा ३ हजार ५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
संघले माउन्टेन उडानको भाडा घटाएर ११ हजारबाट १० हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ कायम गरेको छ । संघका प्रवक्ता आचार्यले निगमले हवाई इन्धनको मुल्य घटाएपनि नियमानुसार संघको कार्यसमिति बैठकले हवाई भाडादर स्थान अनुसार घटाएको बताए ।
सबैभन्दा धेरै इन्धन शुल्क सुगम रुटअन्तर्गत धनगढीको घटेको छ । काठमाडौं–धनगढीको एकतर्फी भाडाअन्तर्गत इन्धन शुल्कमा १ सय ८१ रुपैयाँ घटेको छ ।
नयाँ भाडादरअनुसार सबैभन्दा लामो दुरीको काठमाडौं–धनगढीको भाडा १२ हजार १९ र कम दुरीको सिमराको भाडा ३ हजार ४५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
संघले माउन्टेन उडानको भाडा घटाएर ११ हजारबाट १० हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ कायम गरेको छ । संघका प्रवक्ता आचार्यले निगमले हवाई इन्धनको मुल्य घटाएपनि नियमानुसार संघको कार्यसमिति बैठकले हवाई भाडादर स्थान अनुसार घटाएको बताउनुभयो ।
इन्धनको मुल्य घटदामा वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीले इमान्दारीतापुर्व भाडा घटाँउदामा यातायात व्यवसायीहरु भने यातायात व्यवस्था बिभागलाई प्रभाबमा पारी उल्टै भाडा बढाउने दाउमा लागि परेका छन् ।
एउटा बसभन्दा कैयौं गुणा बढी मुल्य पर्ने हवाईजहाजको भाडा वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुले सहजतापुर्वक घटाइरहंदा जहाजको तुलनामा निकै कम पर्ने बस सञ्चालक कम्पनीभने बैकको व्याज, पाटपुर्जाको महंगी लगायतका बहानामा यातायातको भाडा बढाउन लागि परेका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले चार बर्ष सम्म सार्वजनीक सवारीसाधनको भाडा नबढेको भन्दै बिभागको कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा यातायातको भाडा बढाउन लागीएको छ ।
दैनिक लाखौ सर्वसाधारण यात्रुहरु चढने सार्वजनीक सवारीमाभने सरकारी निकायकै मिलेमतोमा भाडादर नघटाइ चलखेल हुंदै आएको छ । यसै महिना दुईपटक इन्धनको मुल्यघटेपछि भाडा नघटाउनको लागि यातायात व्यवसायीहरु उल्टै भाडा बढाउने चलखेलमा लागेका छन् । यातायात व्यवसायीको प्रभाबमा परेको यातायात व्यवस्था बिभाग तथा मन्त्रालयले समेत व्यवसायीलाई ग्रिनसिग्नल दिइसकेको बुझिएको छ ।
ट्याग्स: sarbajanik yatayat